Mercedes ရဲ့ ကြီးမားလွန်းတဲ့ Hyperscreen နည်းပညာကို စိန်ခေါ်ဖို့ ရှိနေတဲ့ Cadillac! – MyMedia Myanmar
Mercedes ရဲ့ ကြီးမားလွန်းတဲ့ Hyperscreen နည်းပညာကို စိန်ခေါ်ဖို့ ရှိနေတဲ့ Cadillac!
ဇိမ်ခံ ကား ကုမ္ပဏီ ကြီး တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Cadillac ကတော့ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး လျှပ်စစ်ကာ အမျိုး အစား အဖြစ် Cadillac Lyriq ကို ဖန်တီးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အခုကားကို ဖန်တီးတဲ့ နေရာမှာ တကယ့်ကို လူအထင်ကြီးစရာ ဖြစ်အောင် လုပ်ပြချင် နေတဲ့ သဘောမှာ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Brand မှာ ရှိထားတဲ့ အကောင်းဆုံး ၊ အဆန်းဆုံး ဆိုတဲ့ နည်းပညာ အသစ် တွေကို ‌ပေါင်း စပ် ပေးလာနိုင်ကာ တီထွင်မှု အရှိဆုံး လုံခြုံရေး နည်းစနစ် တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Super Cruise System ကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးလာဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ အဆိုပါ စနစ်မှာတော့ အခုလက်ရှိ ကုမ္ပဏီရဲ့ ကားတွေမှာ လုံးဝ မရရှိနိုင်သေးတဲ့နည်းပညာ အသစ်အဆန်းတွေ အကုန်လုံး ပါဝင်လာမှာပါ။ အဆိုပါ Features တွေထဲမှာတော့ Automatic Lane Change စနစ် လို နောက်ဆုံး ပေါ် တွေလည်း ပါဝင် လာမှာ ဖြစ်ကာ အခုလို နည်းပညာပိုင်း အရ အဆန်းသစ် ဆုံးတွေ ထည့်သွင်း လာတာတောင်မှ ဈေးနှုန်းက အရမ်းကြီး မြင့်မားနေတာ မျိုးတော့ မဟုတ်နိုင်တာ ကြောင့် ပိုလို့တောင် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အဆိုပါ ကား ကနေ ဘယ်လို အရာ မျိုးတွေ ကို မျှော်လင့် နိုင်မလဲ ဆက်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
အခြားသော ‌အရာတွေထက် ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုကတော့ အရွယ် အစား အားဖြင့် ကြီးမား လွန်းနေတဲ့ ၃၃ လက်မ အရွယ် LED Display ကြီးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လည်း Cadillac ဘက်ကတော့ ဒီနည်းပညာ သုံးမယ် ဆိုရင် တကယ့် လက် တွေ့မှာ အဆိုပါ Screen တစ်ခု တည်း တပ်ဆင် လိုက်ရုံ နဲ့တော့ ပြီးမယ် မထင်ပါဘူး။ အခုလို တပ်ဆင်မယ့် နေရာမှာတော့ Cadillac ဟာ Territory Studio နဲ့ Rightpoint တို့ရဲ့ အကူအညီ ကို ယူရဖွယ် ရှိနေပြီး သုံးစွဲ ရလည်း လွယ်ကူ မယ့် အပြင် ကြည့်လိုက်တာ နဲ့ တင် တကယ့်ကို ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ဖြစ်နေဖို့ အတွက် လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခု အဖြစ် ဖန်တီးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင် ပိုင်း ဒီဇိုင်း တင်မကပါဘူး ၊ ကြည့်လို့ အင်မတန် ကောင်းတဲ့ Graphics Design တွေ ချောမွေ့ ပြီးစိတ်ချမ်းသာ စရာ ကောင်းနေမယ့် Animations တွေ နဲ့လည်း ပေါင်းစပ်ပေးထားဦးမှာ ဖြစ်လို့ တကယ့်ကို အနုပညာ တစ်ရပ်ပါပဲ။ ဒါတင် မကသေးပဲ နောက်ထပ်ထူးခြားတာ တစ်ခု ကတော့ အဆိုပါ Screen က ကောင်းကောင်း Customize လုပ်နိုင်မယ့် အခြေ‌အနေမှာ ရှိနေပြီး သုံးစွဲသူ ဘက်က လိုသလောက် အချက် အလက် ကိုပဲ ပြနိုင်အောင်လည်း စီစဉ် နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် GM ရဲ့ ပုံမှန် ဖန်တီးမှု နဲ့ လုံးဝ ကွဲထွက် နေတာကိုလည်း သတိပြုရဦးမှာပါ။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပက်သက်လို့တော့ User Interface Design ရဲ့ Group Senior Manager ဖြစ်သူ Bill Thompson က ပြောကြား ရာမှာတော့ Cadillac အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ User Interface အပိုင်းကို ပြောင်းလဲ ဖန်တီးရာမှာ လန်းဆန်းတက်ကြွတဲ့ အသွင် နဲ့ မတူညီတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဝိုင်းဝန်း ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Territory Studio ရဲ့ အတွေ့အကြုံ ပိုင်းကလည်း အများကြီး အရေးပါခဲ့သလို သူတို့ ဖန်တီးနေကြ ရုပ်ရှင် တွေ ၊ ဂိမ်းတွေ နဲ့ အခြား Brand တွေက ကောင်းကွက် တွေကိုပါ ယူပြီး ဖန်တီးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ဖန်တီးမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Rightpoint ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ကတော့ သိပ်ပြီး များများ စားစား မရှိပဲ Interface ကို ပိုပြီး ကြည့်လို့ ကောင်းအောင် နဲ့ ဘယ်လိုအရာ မျိုးတွေ ကို အလုပ်လုပ် ဖို့ ထည့်သွင်း ထားသင့်သလဲ ဆိုတာ တွေကို ပဲ မေးခွန်းထုတ်ကာ ဆုံးဖြတ်ပေးရတဲ့ အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ Executive Creative Director ဖြစ်သူ Gabriel Bridger ကတော့ သူတို့မှာ Cadillac Brand ရဲ့ User Experience အပိုင်း ကို ပိုမို ဆန်းသစ် ပြောင်းလဲအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက် အခွင့် အရေးရခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဇိမ်ခံ Brand တစ်ခု အနေတဲ့ Digital ပိုင်း အရ အရေးပါလှတဲ့ ကမ္ဘာ မှာ ဘယ်လိုမျိုး လိုက်ပါ ရပ်တည်နိုင်သလဲ ဆိုတာ ကိုပါပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုထား ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ အဓိက အတွေးအခေါ် ပိုင်းကတော့ Interface အသစ် မှာ အသေးစိတ် အချက်အလက် တွေကို များနိုင်သလောက် များ အောင် ပြသ နိုင် ရမယ် ၊ဒါ့အပြင် ဘယ်အရာတွေက ဘာတွေဖြစ်နေလဲ စသဖြင့် အချက်အလက်တွေ အကုန်လုံး ကို ကားထဲမှာ တင် အချိန်ပြည့်သိချင် တဲ့ သူ တွေ အတွက် လည်းအထောက် အကူ ပြုနိုင်ရမယ် ၊ အဲ့ဒီလို မျိုး အချက်အလက်တွေ အများကြီး ပြသနိုင် ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်ဟာက ပိုပြီး အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ မျိုးကိုလည်း ရှင်းလင်း တိကျနေအောင် ပြသနိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ စံနှုန်း တွေ နဲ့ ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ အခု လက်ရှိ မြင်တွေ့ ရသလောက်ကတော့ အခုလို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဖန်တီးလိုက်မှု က တကယ့်ကို ကောင်းမွန် တဲ့ လုပ်ဆောင် ချက် ဖြစ်ပြီး တော့ Mercedes ရဲ့ Hyperscreen နည်းပညာ က တော့ စိန်ခေါ် ခံ လိုက်ရပြီ လို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ။
The post Mercedes ရဲ့ ကြီးမားလွန်းတဲ့ Hyperscreen နည်းပညာကို စိန်ခေါ်ဖို့ ရှိနေတဲ့ Cadillac! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-10T18:30:47+06:30January 10th, 2021|MYCARS MYANMAR|